မနက်ေ စ ာစော တစ်ကြောင်း တည်း သာ ရွတ် ဆိုရပြီး ငွေဒလ ဟော ဝ င်စေ တဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါ ထ ာတော်ကြီး – Cele Lover
မနက်ေ စ ာစော တစ်ကြောင်း တည်း သာ ရွတ် ဆိုရပြီး ငွေဒလ ဟော ဝ င်စေ တဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါ ထ ာတော်ကြီး
မနက်ေ စ ာစော တစ်ကြောင်း တည်း သာ ရွတ် ဆိုရပြီး ငွေဒလ ဟော ဝ င်စေ တဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါ ထ ာတော်ကြီ
ပရိသတ်ကြီး တို့အတွက်ကောင်းသတင်းလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ် မိမိမှာရှိနေတဲ့ လာဘ်ေ တွ မနိုးဘဲ မပွင့်ဘဲရှိနေရင် လာဘ်နှိုးဂါထ ာတော်ကြီးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးတာနဲ့ လာဘ်နိုး လာဘ်ပွင့်ပြီး ငွေတွေတလဟော ဝင်ရောက်ေ စမှာဖြစ်ပါတယ် လာဘ်န ှိုးဂါ ထာေ တာ်ကြီ းကို အောက် မှာ ဖော်ပြပေး လိုက်ပ ါတယ်…
တိုင်းနီးပါး လာဘ်ပွင့် လာဘ်ရွှင်ဂါထာတို့ ငွေဝင်ဂါထာ တို့ပဲ ရွတ်ဆိုနေကြပြီး လာဘ်ကိုနှိုးေ ပးဖို့ မေ့နေတတ် ကြပါ တယ်အဲ့ေ တာ့ လာဘ်လာဘ ငွေကြေးတွေက ဝင်သင့်သလောက်မ ဝင်တော့ဘူးပေါ့ အဲ့တာကြောင့် ဒီလာဘ်နှိုးဂါထာလေ းကို တင်ပြပေ းလိုက်ပါ တယ်။ရွတ်ဆို ပုံကေ တာ့မနက် အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ကိုကိုင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို အာရုံပြုပြီး
၁။ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ ကို ၃ခေါက် ရွတ်ဆိုပါ။ ၂။ သရဏဂုံ ၃ပါးကို တစ်ခေါက်ရွတ် ဆိုပါ။ ၃။ ပြီးရင်တော့ အခုပြောတဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါထာကို ၂၇ ခေါက်ရွတ်ဆို ရပါ မယ်။
လာဘ်နှိုးဂါ ထာတော်သိဒ္ဓိတေဇာ သိဒ္ဓိဝရာသိဒ္ဓိဇေယျာ သိဒ္ဓိကမ္မါသတ္ထု ပူဇာ လာဘဝရာ ..သဗ္ဗေပိယာ ဘဝတုမေ။…ဒါဆို ကိုယ့် အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ လာဘ် ကိုနှိုးပြီး ပါပြီ….
လာဘ်ပွင့်ဂါထာတို့ လာဘ်ခေါ်ဂါထာတို့ ငွေရဂါထာတို့ နှစ်သက်ရာ ထပ်ပြီး ရွတ်တော့ပေါ့။ေ န့စဉ်မပျက်အကွက်ဆောင်ရွက် ပါ၇ ရက်အတွင်း ထူးခြားသိသာလာပါလိမ့်မယ် သတိပြုရမှာက လာဘ်နှိုးပြီးမှ လာဘ်ခေ ါ်ပါ
ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း လာဘ်တွေနိုးလာအောင် လာ ဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် လာဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး ရွတ်ပြီးရင် လာဘ်ေ ခါ် လာဘ်ပွင့် လာဘ်ရွှင်ဂါထာတခု ခုတော့ ရွတ် ဖို့ မမေ့နဲ့နော်… အားလုံး သိအောင် လည်း ပြန် Share ပေးပါနော်..
မနက္ေ စ ာေစာ တစ္ေၾကာင္း တည္း သာ ရြတ္ ဆိုရၿပီး ေငြဒလ ေဟာ ဝ င္ေစ တဲ့ လာဘ္ႏွိုး ဂါ ထ ာေတာ္ႀကီ
ပရိသတ္ႀကီး တို႔အတြက္ေကာင္းသတင္းေလးတစ္ခုေျပာျပခ်င္ပါတယ္ မိမိမွာရွိေနတဲ့ လာဘ္ေ တြ မႏိုးဘဲ မပြင့္ဘဲရွိေနရင္ လာဘ္ႏႈိးဂါထ ာေတာ္ႀကီးကို ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးတာနဲ႔ လာဘ္ႏိုး လာဘ္ပြင့္ၿပီး ေငြေတြတလေဟာ ဝင္ေရာက္ေ စမွာျဖစ္ပါတယ္ လာဘ္ႏ ႈိးဂါ ထာေ တာ္ႀကီ းကို ေအာက္ မွာ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပ ါတယ္…
တိုင္းနီးပါး လာဘ္ပြင့္ လာဘ္႐ႊင္ဂါထာတို႔ ေငြဝင္ဂါထာ တို႔ပဲ ႐ြတ္ဆိုေနၾကၿပီး လာဘ္ကိုႏႈိးေ ပးဖို႔ ေမ့ေနတတ္ ၾကပါ တယ္အဲ့ေ တာ့ လာဘ္လာဘ ေငြေၾကးေတြက ဝင္သင့္သေလာက္မ ဝင္ေတာ့ဘူးေပါ့ အဲ့တာေၾကာင့္ ဒီလာဘ္ႏႈိးဂါထာေလ းကို တင္ျပေပ းလိုက္ပါ တယ္။႐ြတ္ဆို ပုံေက တာ့မနက္ အိပ္ယာထ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးတာနဲ႔ ပိုက္ဆံအိတ္ ကိုကိုင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို အာ႐ုံျပဳၿပီး
၁။ နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ကို ၃ေခါက္ ႐ြတ္ဆိုပါ။ ၂။ သရဏဂုံ ၃ပါးကို တစ္ေခါက္႐ြတ္ ဆိုပါ။ ၃။ ၿပီးရင္ေတာ့ အခုေျပာတဲ့ လာဘ္ႏႈိး ဂါထာကို ၂၇ ေခါက္႐ြတ္ဆို ရပါ မယ္။
လာဘ္ႏႈိးဂါ ထာေတာ္သိဒၶိေတဇာ သိဒၶိဝရာသိဒၶိေဇယ်ာ သိဒၶိကမၼါသတၳဳ ပူဇာ လာဘဝရာ ..သေဗၺပိယာ ဘဝတုေမ။…ဒါဆို ကိုယ့္ အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ရမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ လာဘ္ ကိုႏႈိးၿပီး ပါၿပီ….
လာဘ္ပြင့္ဂါထာတို႔ လာဘ္ေခၚဂါထာတို႔ ေငြရဂါထာတို႔ ႏွစ္သက္ရာ ထပ္ၿပီး ႐ြတ္ေတာ့ေပါ့။ေ န႔စဥ္မပ်က္အကြက္ေဆာင္႐ြက္ ပါ၇ ရက္အတြင္း ထူးျခားသိသာလာပါလိမ့္မယ္ သတိျပဳရမွာက လာဘ္ႏႈိးၿပီးမွ လာဘ္ေခ ၚပါ
ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးတို႔လည္း လာဘ္ေတြႏိုးလာေအာင္ လာ ဘ္ႏႈိး ဂါထာေတာ္ႀကီး ကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ လာဘ္ႏႈိး ဂါထာေတာ္ႀကီး ႐ြတ္ၿပီးရင္ လာဘ္ေ ခၚ လာဘ္ပြင့္ လာဘ္႐ႊင္ဂါထာတခု ခုေတာ့ ႐ြတ္ ဖို႔ မေမ့နဲ ႔ေနာ္… အားလုံး သိေအာင္ လည္း ျပန္ Share ေပးပါေနာ္..
Previous Article ဘယ်အစိုးရတက်တက် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရတာဆိုသူများ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်ကြားထားတာလေး ဖတ်ကြည့်ပါ
Next Article အသက် အရွယ်ကြီးရင့်နေတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးလည်း ချူချာလွန်းလို့ အလှူရှင်လိုအပ်နေကြတဲ့ သက်ကြီးအဖိုးအဖွားတွေ